अन्तिममा सलमानभन्दा पहिला अनिल कपूरलाई अफर! - हिमाल दैनिक
अन्तिममा सलमानभन्दा पहिला अनिल कपूरलाई अफर!
काठमाडौँ २७ भाद्र २०७८, आईतवार ०९:१०
बलिउड अभिनेता सलमान खानको फिल्म ‘अन्तिम: द फैनल ट्रुथ’ लाई लिएर अहिले बलिउडमा चर्चाको बिषय बनेको छ ।
गणेश चतुर्थीमा अन्तिमको एक गीत रिलिज भएको थियो । विघ्नहर्ता नाम गरेको उक्त गीत अहिले युटुबमा ट्रेन्ड गरेको छ ।
यस फिल्म सम्बन्धमा अहिले बिभिन्न खबरहरु बाहिर आएका छन् । यस फिल्ममा सलमानले निभाएको किरदार उनि भन्दा अघि अनिल कपुरलाई अफर गरिएको थियो ।
फिल्ममा निर्माताहरुले फिल्म बनाउने योजना गरेसंगै यो फिल्ममा अनिललाई खेलाउने विचार गरेका थिए । फिल्मको कस्ट नै निश्चित नभई सलमानलाई गेस्ट अपीयरेन्समा आउने खोशाना भयो ।
तर, पछि सलमान नै मुख्य भूमिकामा देखिने भएका छन् । यस फिल्ममा सलमान संगै उनका ज्वाई आयुष शर्मा पनि मुख्य भूमिकामा देखिएका छन् । यो एक्सन थ्रिलर फिल्म महेश मान्जरेकरले निर्माण गरेका हुन् । यो फिल्ल्म मराठी फिल्म ‘मुलशी पैटर्न’ को रिमेक हो । यो फिल्ल्म हिन्दी, तेलुगु, कन्नड र उडिया भाषामा रिलिज हुनेछ ।
अघिल्लोकंगनाको ‘थलाइवी’ फिल्म लिक
पछिल्लोरणवीरको ‘सर्कस’मा दिपिका ‘मीनम्मा’ को भूमिकामा देखिदै
तपसी पन्नुको रश्मि रकेटको ट्रेलर सार्बजनिक
सलमान खानको फिल्म अन्तिम अब सिनेमा हलमा नै रिलिज हुने
करीनाको फिल्मी करियरमा आधारित ‘नाजनीन टू नैना’ बुक रिलिज
सनी देओल-अमीषा पटेलको ‘गदर-२’ आउदै
ओटीटी प्लेटफर्ममा रणबिर कपुरको डेब्यु
निर्देशक बिशाल भारद्वाजको फिल्ममा तब्बु